तुलसीपुरमा अक्सिजन प्लाण्ट असार पहिलो सातादेखि संचालनमा आउने « Tulsipur Khabar
तुलसीपुर, १३ जेठ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा अक्सिजन प्लाण्ट जडानका लागि गृहकार्य सुरु भएको अस्पतालले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि अक्सिजन प्लाण्ट र पाइप लाइन जडान गर्नका लागि अस्पतालले गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
अक्सिजन प्लाण्ट र पाइप लाइनको दररेट लिइसकेकाले बिहीबारसम्म खरिदका लागि टेण्डर आब्हान गर्ने राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट काम गर्नुगराउनु भन्ने व्यहोराको पत्र आइतबार आएपछि अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि ७ दिने टेण्डर आब्हानको तयारी गरेको हो ।
‘भोलि या पर्सीसम्म हामी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर सात दिने नोटीसमा १५ दिनको समय राखेर इबिल्डीङ गछौं,’ डा. सिंहले भन्नुभयो– ‘त्यसको १५ दिनभित्र कन्टयाक्टरले जडानको काम सक्ने वित्तिकै अक्सिजन उत्पादनको काम सुरु हुन्छ ।’
असार महिनाको पहिलो हप्तादेखि संचालनमा ल्याउनेगरी तयारी थालेको अस्पतालले नयाँ जडान गर्न लागिएको अक्सिजन प्लाण्टबाट २४ घन्टामा ७५ वटा अक्सिजन सिलिण्डर उत्पादन गर्ने बताएको छ ।
अस्पतालमा रहेको साविक अक्सिजन प्लाण्टले दैनिक १०÷१२ वटा अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले कोभिड लक्षित गरेर प्लाण्ट जडानको तयारी गरेपनि कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीलाई अक्सिजन नपुग्ने डा. सिंहले बताउनुयो । बेलझुण्डीलाई दैनिक ३ सय ६० वटा अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक पर्छ । यद्यपी केहि सहजता भने हुने बताइएको छ ।
जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल सहित १२ वटा अस्पतालका लागि १६ करोड ८० लाख बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । अक्सिज अभावमा कोरोना संक्रमित बिरामीको धमाधम मृत्यु हुन थालेपछि कोभिड –१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण गर्न सबै उपाय अबलम्बन गर्ने नीति अनुरुप देशका अधिकांस अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट, पाइप लाइन, एचडियु जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सूनिश्चितता गरेको हो ।